Dhalinyaro ka tirsan askartii tababarka loogu qaaday Eritrea oo kasoo baxsaday xeryihii ay ku jireen Xog ay ka shifeen | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dhalinyaro ka tirsan askartii tababarka loogu qaaday Eritrea oo kasoo baxsaday...
Dhalinyaro ka tirsan askartii tababarka loogu qaaday Eritrea oo kasoo baxsaday xeryihii ay ku jireen Xog ay ka shifeen
Dhalinyaro ka tirsan askartii ay dowladda federaalka Soomaaliya tobabarka ugu qaaday dalka Eritrea ayaa kasoo baxsaday xeryihii ay ku jireen ee dalkaas.
“Waxaa kamid ahaa ciidamadii laga qaaday magaalada Muqdisho, waxaa markii hore na-lagu qalday in nala geynayo Qatar, balse waxaa nagala dejiyay Eritrea,” ayuu yiri mid kamid ah dhalinyarada askarnimada loogu qaaday Eritrea ee soo baxsaday.
Dhalinyarada oo socdaal dheer oo dhulka ah kusoo soo maray gobolada Itoobiya iyo Jabuuti ayaa ugu dambeyntii soo gaaray magaalada Garoowe ee caasimada maamulka Puntland.
“Anaga iyo waxaa isku dhacnay askartii Eritrea-ka ahaa oo dagaal ina-dhexmaray waxaa nagala laayay qaar kamid ah askarteeni u socday tobabarka, waxayna nala dhaceen bambooyin iyo xabado” ayuu yiri mid kamid ah askarta kasoo baxsaday Eritrea.
Sidoo kale waxay sheegen intii ay ku jireen xeryaha tobabarka ay la kulmeen tacadiyo kala duwan oo iskugu jira jirdil iyo ciqaab, taasi oo markii dambe ay u adkeysan waayen, oo keentay inay kasoo baxsadaan.
Askarta ay dowladda federaalka u geysay Eritrea tobabarka oo ay qeyb ka ahaayeen dhalinyartaan kasoo baxsatay ayaa waxay dalkaas ku sugnan yihiin muddo ka badan 2-sanno, oo aysan helin daawo iyo xuquuqda aas-aasiga ah, sida ay sheegen.
Dhalinyartaan maanta warbaahinta la hadlay oo wajiyadooda laga dheehan karo diifta iyo rafaadka ay usoo mareen sidii ay dalka dib ugu soo laaban lahaayeen ayaa qaarkood waxaa lagu xiray deegaano ka tirsan Itoobiya, kadib markii ay booliska u gacan galeen ayaga oo baxsad ah.
Ugu dambeyntiina waxay baaq u direen waalidiinta ay carruurtooda kaga maqan yihiin Eritrea, “Alxamdulilh waxaa imaanay dhulkeeni hooyo socdaal dheer kadib, waxaa waalidiinta Soomaaliyeed ee ay ka maqan yihiin carruurtoodi si deg-deg ah ugu baaqeyna inay jiriyaan oo loo keeno.”
Arrintan ayaa imaneysa xili ay sarre u kacday xiisada ka dhalatay askarta tobabarka loogu qaaday Eritrea oo sanado ku maqan, waxaana magaalada Muqdisho maanta ka bilowday dibad-bax ballaaran oo lagu dalbanayey in dalka dib loogu soo celiyo askartii loo qaaday dalka Eritrea, kadib markii ay soo baxday in laga qeyb-galiyey dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya.
Previous articleWasiir dubbe oo Gaashaanka u daruuray Mar kale in dhalinyaradii Muqdisho laga qaaday Itobiya ka dagaalameen
Next articleWasaaradda Caafimaadk oo shaacisay in dalka oo dhan laga bilaabay qaadashada qeybta labaad ee tallaalka ka hortagga cudurka Covid 19.
Qasrigii duulayay ee Qadaafi oo dib loo soo celiyay magaalada caasimadda ah ee Tripoli
Duqaymo alshabaab lagula eegtay deegaanada , Abag-beeday, Gobid-Galoole, Garasweyne iyo Moorogaabey...
Wararka aan ka heleyno gobolka Bakool waxay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay ay dowr deegaan duqeymo ka fuliyeen diyaarado dagaal, kuwaas oo lala beegsaday...
Shiinaha oo sheegay gantaalkii fakaday oo dhulka ku soo socday...
Rooble oo ka hor yimid muda kordhinta Farmaajo loo sameeyey
Maxkamadda militeriga oo xukun ku riday askar oo loo haystay dilka...